गायक शिव परियारद्वारा निशा घिमिरेका लागि आर्थिक सहयोग,कलाकार हुनुको दायित्व पूरा गर्न आग्रह – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/गायक शिव परियारद्वारा निशा घिमिरेका लागि आर्थिक सहयोग,कलाकार हुनुको दायित्व पूरा गर्न आग्रह
२ वर्ष अघि अभिनेत्री बन्ने रहरले भारत पुगेकी नेपाली कलाकार निशा घिमिरेको जीवनमा अप्रत्याशित घट’ना भएको छ । भारतमा डिप्लोमा पढ्न गएकी २२ बर्षिय कलाकार निशा घिमिरे गाडी दु’र्घटनामा परेकी हुन । उक्त दु’र्घटनाबाट गम्भीर घा’इते भएपछी उनको ब्रेन ह्यामरेज भयो ।
निशाको उप’चार गर्दागर्दै परिवारको सम्पत्ति सकिएको परिवारले बताएको छ । निशा अहिले भैसीपाटीमा सानो टिनले बारेको घरमा बसिरहेकी छन्। उनको त्यो दर्दा’नक अवस्था देखेपछि प्राय: जसो सबैको आँखा रसा’उछ ।
निशाले नेपाली र मैथिली भाषामा बनेको फिल्म ‘मधेसीपुत्र २’ मा मुख्य भुुमिका निभाएकी थिइन् । उनले ‘डियर जिन्दगी’ टेलिश्रंखला, केही म्युजिक भिडियोमा पनि काम गरिसकेकी छिन् । उनको सरिरमा हड्डी र छाला मात्रै छ। २३/२४ बर्षिय निशा ८०/९० बर्षको जस्तो देखिन्छिन । उनी हिड्न र बोल्न पनि सक्दिनन ।
यसैक्रममा निशा लाई “नर्भिक अस्पताल”ले उ’द्दार गरेको छ ।अस्पतालकी प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले घिमिरेको दर्दनाक अवस्था फोटोमा देखेपछि आफूले उ’द्धार गरेको बताइन् । अब आफ्नै समन्वयमा उनको सम्भव हुनेजति उ’पचार गरिने उनले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी अस्पतालले उनको उपचार निशुल्क गर्ने बताएको छ । निशाको उ’द्दारको लागि समाजसेवी दुर्गा नाथ दाहालले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेका छन । अहिले अस्पताल भर्ना भएपछि उनको स्वस्थ्य अबस्थ सुधार भएको उपचार मा संलग्न स्वस्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन ।
यसैक्रममा गायक शिव परियारले कलाकार निशा घिमिरेका लागि रु. १0,000(दश हजार) आर्थिक सहयोग गरेका छन। गायक परियारले अन्य ईच्छुक कलाकार साथिहरुलाई सकेको सहयोग गर्न अपिल गरेका छन । उनले कलाकार हुनुको दायित्व पुरा गर्न निशा घिमिरेको बुवा प्रेम प्रसाद घिमिरेको सनराइज बैंक खाता न. 0840613613205001 मा आर्थिक सहयोग गर्न आव्हान समेत गरेका छन ।
निशाको लागी थुप्रै सहयोगहरु आउने क्रम जारी छ। उनले आफू ले सहयोग गरेको कुरा सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका छन ।
थुप्रै भिडियोमा उनको परिवारले बताए अनुसार आर्थिक अवस्था पनि निकै क’मजोर भएको छ। निशालाई सहयोग जुटाउनका लागि सामाजिक संजालमा अभियानहरु चलिरहेको छ। केहि मनकारी मानिसहरु उनलाई सहयोग गर्न उनकै घरमा पनि पुगिसकेका छन्।
६ वर्षपछि खुल्यो इजरायल, तलव डेढ लाख भन्दा बढी हुने !
फ्यानले सोधे- तपाईंको ‘हट’ तस्वीर कुन ? वर्षाले देखाइन् यस्तो !
लकडाउन लाई लिएर देशैभरिका नागरिकहरुलाई एकाबिहान नेपाल सरकारले दियो अत्यन्तै खुसिको खबर !
मोटी मोटी असाध्यै हट एकता कपुरले खोलिन् अझैपनि बिवाह नगर्नुको रहस्य (भिडियो)